ဆူဇူကီးက Android ကား DVD, ဆူဇူကီး Touch ကိုမျက်နှာပြင်က Android ကား DVD, ဆူဇူကီးက Android 4.2 ကား DVD ၏တရုတ်ပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:ဆူဇူကီးက Android ကား DVD,ဆူဇူကီး Touch ကိုမျက်နှာပြင်က Android ကား DVD,ဆူဇူကီးက Android 4.2 ကား DVD,ဆူဇူကီးက Android 4.1 ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဆူဇူကီးက Android ကား DVD
ဆူဇူကီးက Android ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဆူဇူကီးက Android ကား DVD, ဆူဇူကီး Touch ကိုမျက်နှာပြင်က Android ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, ဆူဇူကီးက Android 4.2 ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Klyde Android9Car Radio Jimny 2020  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Swift 2019 အတွက်နှစ်ဆ din touch ထိတွေ့မှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SWIFT 2011 ၂၀၁၂ အတွက် Klyde android ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Swift 2018 အတွက် aftermarket overhead DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wagon R ကို 2016 - မော်တော်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေး - 2018  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CIAZ 2017 အတွက်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေးစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Vitara 2017 အဘို့အ autoradio android  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Swift 2013-2018 အတွက်2din multimedia system ဖြစ်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆွစ်ဖ် 2018 အတွက် dash ကားဖျော်ဖြေရေးစနစ်အတွက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Vitara 2015-2017 အတွက်ကားဒိုင်ခွက်ဗီဒီယိုဖွင့်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Octa Core 32G ရေဒီယို GPS စနစ် Suzuki Ignis 2017  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၇.၁.၁ Sukuzi Vitara အတွက်ကား DVD Player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
GPS ဖြင့် Suzuki Grand Vitara အတွက်ကစားသမား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
၁၀.၁ လက်မ HD Touchscreen 2015 Suzuki Vitara  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Suzuki Grand Vitara မာလ်တီမီဒီယာကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CIAZ 2015 အတွက် android ကား DVD ကစားစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက်ယာလက် Suzuki Jimny အတွက် Android Multimedia Player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Jimny အတွက် PX5 android ကားစတီရီယိုသည် 2019 မှထွက်ခွာခဲ့သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Suzuki Vitara အတွက် Android 8inch Car Multimedia Player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
SWIFT 2011-2012 android ကားသွားလာမှု ဤယူနစ် SWIFT android gps သည် Android 10 operating system,4+ 64G memory, Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ပါ ၀ င်သည့်နောက်ကင်မရာပါ ၀ င်သည်။4* 50w...
Klyde Aveo Epica Captiva2ကားကားစတီရီယို ဒီယူနစ် Aveo Epica Captiva ကို Android 10 operating system,4+ 64G memory, Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS နှစ်ဆသောဒီဒင်း။4* 50w...
Klyde Android9Car Radio Jimny 2019-2020 ဤသည် Android9Car Radio Jimny ကိုနောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 operating system၊4+ 32G memory, Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ပါဝင်သည်။4* 50w...
Swift 2019 အတွက်နှစ်ဆ din touch ထိတွေ့မှု
ဆွစ်ဖ် 2019 အတွက်နှစ်ချက်ဒီမျက်နှာပြင် ၁။ Spotify နှင့် Pandora တို့ကိုသင်၏ဖုန်းမှ Bluetooth မှတစ်ဆင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသန်းပေါင်းများစွာသောသီချင်းများနှင့်ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၂။...
SWIFT 2011 ၂၀၁၂ အတွက် Klyde android ကားရေဒီယို
SWIFT 2011 ၂၀၁၂ အတွက် Klyde android ကားရေဒီယို ၁။ Spotify နှင့် Pandora တို့ကိုသင်၏ဖုန်းမှ Bluetooth မှတစ်ဆင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောသန်းပေါင်းများစွာသောသီချင်းများနှင့်ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၂။...
Swift 2018 အတွက် aftermarket overhead DVD player
Swift 2018 အတွက် aftermarket overhead DVD player Swift အတွက် Android Automotive Head Unit သည်စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ လာမည့်သီချင်းကိုကျော်။ အသံပမာဏကိုချိန်ညှိပါသို့မဟုတ်အခြားချန်နယ်တစ်ခုကိုပြောင်းပါ။ Swift ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည့်...
Wagon R ကို 2016 - မော်တော်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေး - 2018
Wagon R ကို 2016 - မော်တော်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေး - 2018 Wagon R ၏နောက်ဆုံးပေါ် Android Multimedia System သည်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်နှင့်ဂီတလုပ်ဆောင်မှု၊ Google အသံရှာဖွေခြင်းစသည်တို့အတွက်ပိုမိုလွယ်ကူလွယ်ကူစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည်။ Android Feature အပြည့် - Wagon R...
CIAZ 2017 အတွက်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေးစနစ်
CIAZ 2013 - 2017 အတွက်ယာဉ်ဖျော်ဖြေရေးစနစ် နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 OS သည် 4GB RAM ပါသောထုတ်ကုန်များတွင်အက်ပ်များထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နိုင်ရန်သေချာစေရန်ပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုကိုတိုးတက်စေသည်။...
Vitara 2017 အဘို့အ autoradio android
Vitara 2015 အတွက် Autoradio Android - 2017 Vitara 2015 - 2017 အတွက် Autoradio ဒီ Android ကို Android Auto & Screen Mirror, GPS Preview ထည့်သွင်းထားသည့်မြေပုံပါသော GPS Navigation စနစ်၊ လက်ဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုနှင့်အသံလွှင့်ခြင်းများ၊...
Swift 2013-2018 အတွက်2din multimedia system ဖြစ်သည်
Swift 2013-2018 အတွက်2din multimedia system ဖြစ်သည် Swift 2018 အတွက် ၈ လက်မ multimedia system သည် anduz 9.0 စနစ်ရှိသော Suzuki ကားများအတွက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအရေးကြီးသောအချက် ၄ ချက်ပါ ၀ င်သည့် GPS စနစ်ဖြင့် GPS...
ဆွစ်ဖ် 2018 အတွက် dash ကားဖျော်ဖြေရေးစနစ်အတွက်
ဆွစ်ဖ် 2018 အတွက် dash ကားဖျော်ဖြေရေးစနစ်၌တည်၏ မက်ဆေ့ခ်ျများကိုဖတ်ရန်သို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်၊ သင်၏ဖုန်းပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲ Swift this head unit အတွက် Two Din 8 Inch Android 9.0 ကားဖျော်ဖြေရေးစနစ်။...
Vitara 2015-2017 အတွက်ကားဒိုင်ခွက်ဗီဒီယိုဖွင့်စက်
Vitara 2015-2017 အတွက် Android 9.0 Car dashboard ဗီဒီယိုဖွင့်စက် ကျနော်တို့ Vitara ဘို့ငါတို့ကားတစ်စီးဒိုင်ခွက်မှာဘာရှိသနည်း ၁။ Vitara အတွက်ဒီယူနစ်ကားဒိုင်ခွက်ဖြင့် BT မှအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ပထမ ဦး စွာ Vitara အတွက် သင့် iPhone...
Octa Core 32G ရေဒီယို GPS စနစ် Suzuki Ignis 2017
Octa Core 32G ရေဒီယို GPS စနစ် Suzuki Ignis 2017 1, 3D Navigation: ကားစတီရီယိုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအချိန်နှင့်တပြေးညီလမ်းညွှန်မှုမြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်မှုကိုတပ်ဆင်ထားသည်။ Octa Core 32G ရေဒီယို GPS Suzuki Ignis 2017 လက်ရှိတည်နေရာ၊ အမြန်နှုန်း၊...
၇.၁.၁ Sukuzi Vitara အတွက်ကား DVD Player
ထုပ်ပိုး: 3.6KGS / သတ်မှတ်ထားသော 400 * 255 * 210MM / လက်ဆောင်သေတ္တာ
၇.၁.၁ Sukuzi Vitara အတွက်ကား DVD Player ၁။ Android 7.1.1 OS ကို google မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂။ Built-in super hardware ဖြစ်သော Quad Core RK 3188 Cortex...
GPS ဖြင့် Suzuki Grand Vitara အတွက်ကစားသမား
GPS ဖြင့် Suzuki Grand Vitara အတွက်ကစားသမား အဓိကအင်္ဂါရပ်များ: ၇ လက်မ ၁၆: ၉ ၈၀၀ * ၄၈၀ ဒီဂျစ်တယ်အဆင့်မြင့် TFT LCD တို့ထိဖန်သားပြင် နောက်ဆုံးပေါ် 800MHz ARM11 ပရိုဆက်ဆာနှင့် WinCE6.0 လည်ပတ်မှုစနစ်ပေါ်တွင်အခြေခံပါ ထည့်သွင်းထားသော GPS လမ်းညွှန်စနစ်။ 3D...
၁၀.၁ လက်မ HD Touchscreen 2015 Suzuki Vitara
၁၀.၁ လက်မ HD Touchscreen 2015 Suzuki Vitara ၁။ ကုန်ပစ္စည်းအထူးပြု နောက်ဆုံးပေါ် Android စနစ်ပါ ၀ င်သည့်ဤနောက်ဆက်တွဲရောင်းဝယ်ရေးဌာနသည် 4G ကွန်ယက်ကိုပံ့ပိုးပေးပြီးသင့်အားအလျင်မြန်ဆုံးအမြန်နှုန်းဖြင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်။ အပြည့်အဝ touch...
Suzuki Grand Vitara မာလ်တီမီဒီယာကားရေဒီယို
Suzuki Grand Vitara မာလ်တီမီဒီယာကားရေဒီယို ၁။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခကြေးငွေလျှော့ချရန်ငွေတောင်းခံလွှာပေါ်တွင်သင်ဒေါ်လာ ၇၅ ခုရေးရန်ကူညီပေးပါမည်။ အကယ်၍ သင်အနေနှင့် Suzuki Grand Vitara Multimedia Car Radio...
CIAZ 2015 အတွက် android ကား DVD ကစားစက်
CIAZ 2015 အတွက် android ကား DVD ကစားစက် CIAZ 2015 ကားဒီဗီဒီ အတွက် ၁ ယခုအလွန်တည်ငြိမ်သည်။ OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံပါတယ် သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းကိုလိုဂို၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် UI အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CIAZ 2015 အတွက်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်...
လက်ယာလက် Suzuki Jimny အတွက် Android Multimedia Player
အသွင်အပြင်: ၁) နောက်ဆုံးပေါ် Android 9.0 octa core system၊ 4GB RAM နှင့် 32GB ROM ပါ ၀ င်သောအဆင့်မြင့် Rockchip PX5 ပရိုဆက်ဆာ၊ အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက်ပိုမိုချောမွေ့မြန်ဆန်သောအပြောင်းအလဲမြန်သည်။ ၂) အရည်အသွေးမြင့်သောရေဒီယို IC: NXP TEF6686၊ Built-in...
Jimny အတွက် PX5 android ကားစတီရီယိုသည် 2019 မှထွက်ခွာခဲ့သည်
Suzuki Vitara အတွက် Android 8inch Car Multimedia Player
တရုတ်နိုင်ငံ ဆူဇူကီးက Android ကား DVD ပေးသွင်း
ဆူဇူကီးက Android ကား DVD ဒီ Suzuki ကားကို install လုပ်နိုင်သည်
ဆူဇူကီးက Android ကား DVD CAR DVD ကိုဂျီပီအက်စ်ရှိသည်, သင်ကထိုကဲ့သို့အခမဲ့များအတွက် Google မြေပုံ IGO, Sygic နှင့် Waze အားမြေပုံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောအွန်လိုင်းမြေပုံများအားအလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Google ကမြေပုံနှင့်အတူ, သင်အရှိဆုံးတိကျမှုနှင့်ကို up-to-date ဖြစ်အောင်လမ်းကြောင်းများ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသွားအလာဒေတာနှင့်ပိုပြီးရနိုင်။ သင့်ရဲ့လမ်းတစ်ဝှမ်းပိုမြန်လွယ်ကူမည်သည့်အခါမျှရှာပါ။
ဆူဇူကီးက Android ကား DVD ပံ့ပိုးမှုလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်: android စမတ်ဖုန်းနှင့် devices များနှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့, အလွယ်ကူသော-connected အင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းများနှင့်ကားကိုဦးခေါင်း uni အကြားနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျရိုးရှင်းစွာလိုအပ်သည့်အပိုမရှိဆော့ဗ်ဝဲနဲ့, ကို USB မှတဆင့် uni ရန်သင့်စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
စတီယာရင်ဘီးထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဆူဇူကီးက Android ကား DVD: လာမယ့်သီချင်းမှ skip volume ကို adjust သို့မဟုတ်အခြားရုပ်သံလိုင်းအကူးအပြောင်း, အပေါငျးတို့သစတီယာရင် whell ပယ်သင့်လက်ကိုယူစရာမလိုဘဲ, သင့်ခရီးလုံခြုံနှင့်ပိုပြီးပျော်စရာအောင်။
ဆူဇူကီးက Android ကား DVD ဆူဇူကီး Touch ကိုမျက်နှာပြင်က Android ကား DVD ဆူဇူကီးက Android 4.2 ကား DVD ဆူဇူကီးက Android 4.1 ကား DVD တိုယိုတာက Android ကား DVD